“Ho tonga anie ny fanjakanao” Mat. 6:10
Ireo mpianatr’i Kristy dia nanantena ny hiavian’ny Fanjakan’ny voninahiny teo no ho eo, saingy tamin’ny nanomezany io tonom-bavaka io dia nampianatra i Jesosy fa tsy mbola izao no fotoana hampijoroana izany. Tokony hivavak mafy mba hiavian’izany toy ny zavatra mbola ho avy izy ireo. Saingy io fangatahana io ihany koa dia toky ho azy ireo. Raha tsy natao hahita ny fiavian’ny fanjakan’ny lanitra amin’ny fotoanandriny izy ireo, ny antony nampivavahan’i Jesosy azy ireo hangataka izany dia mampiharihary fa amin’ny fotoana voatendrin’Andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga izany.
Eo an-dalam-pametrahana azy ny fanjakan’Andriamanitra ankehitriny, rehefa milefitra amin’ny fiandrianan’ny Fitiavany isan’andro ireo fo feno fahotana sy fikomiana. Saingy ny fametrahana ny Fanajakn’ny voninahiny dia tsy ho tonga raha tsy amin’ny fotoana fiavian’i Kristy fanindroany ho teo amin’izao tontolo izao.
Tsy amin’ny fiverenan’i Kristy fanindroany ara-batana tsy akory vao ho afaka handray ny fanjakany ny vahoakany. Hoy ny Mpamonjy: “Ary raha tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, arahin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny Izy; ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany (...); ary amin’izany ny Mpanjaka dia hilaza amin’izay eo amin’ny ankavanany hoe: Avia hianareo izay notahinvoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat. 25:31-34 . Rehefa tonga ny Zanak’olona, ny maty dia hatsangana tsy ho lo intsony ary ny velona hovana. Amin’ny alalan’io fiovana lehibe io no nanomanana azy ireo mba handray ilay fanjakana. Ny olona amin’ny toetrany ankehitriny dia mety maty, mety lo; saingy ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy hisy fahalovana, haharitra mandrakizay. Vokatr’izany ny olna amin’ny toetrany ankehitriny dia tsy afaka hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Saingy rehefa tonga i Jesosy, dia hanolotra tsy fahafatesana ho an’ny vahoakany Izy; ary miantso azy ireo mba handova ny fanjakana izay izy ireo irery no mpandova azy hatreto.
Raha “hianareo an’i Kristy”, “dia anareo ny zavatra rehetra” 1 Kôr. 3:23,21. Saingy ianareo dia tahaka ny zanaka izay tsy mbola tafapetraka amin’ny fifehezana ny lovany. Tsy nanakina taminao ireo harenao sarobidy Andriamanitra, mba tsy hilalaovan’i Satana anao amin’ireo fahaizany feno hafetsena, tahaka izay nataony tamin’izy roa tao Edena. Mihazona izany ho anao i Kristy, tsy ho azon’ilay mpamitaka.